Rakkoo Gujii fi Geedewoo dagatame - BBC News Afaan Oromoo
Ebla darbee jalqabee sababii walitti bu'iinsa saboota gidduutti uumameen namootni gara miiliyoona tokkootti siqan daangaalee Godina Gujii Lixaafi Geedewoo irraa akka buqqa'an gabaasni Mootummoota Gamtoomanii ni hima.
Haa ta'uutii dhimmichi xiyyeeffannoo malu akka hin arganne Kaawunsiliin baqataa Norweey beeksiseera. Waldaan idila addunyaa Fannoo Diimaas hawaasni addunyaa dhimmichaaf xiyyeeffannaa hin kennineefi jechuun komachaa ture.
Godina Gujii Lixaatti bulchaa aanaa Qarcaa kan tahan Obbo Gadaa Godaanaa aanicha keessatti kaampii buqqaatotaa sadii keessa abbaa warraa kuma afur, walumaagalatti yoo xiqqaate namootni kuma 23 tahan gama lachuu irraa buqqa'an akka jiran BBC tti himaniiru.
Bulchaan godinichaa ''namootni wal-beekuufi firoomaan mana isaanii keessa namootaaf dahoo kennaa akka jiran himanii, haala buqqaatonni kaampii keessa jiran qabeenyi isaanii harkaa bade waan jiruuf gargaarsa mootummaaf miti mootummaan eegaa jiru'' jedhan.
Kana malees haala qilleensaafi jireenya buqqaatummaa baruu dadhabuutiin dhukkuubaaf illee saaxilamaa akka jiran dubbatu.
Gama biraan waldaan Fannoo Diimaa Itoophiyaafi Koreen Fannoo Diimaa Idila addunyaa waliin tahuun guyyaa lama dura buqqaatota daangaa lachuu kuma 60 tahaniif gargaarsa hatattamaa dhiyeessuu akka jalqabe ibseera.
Duula tola oltummaa miidiyaalee hawaasummaa fayyadamuun taasifamuun immoo buqqaatota kunneen qaqqabuuf hojiin hojjetamaa jira.
Qindeessituun kaka'umsa kanaa Heldaanaa Takasta ''Meeshaalee manaa dabalatee uffata qorraa fi uffannaawwan garagaara namoota irraa walitti qabuun garasiitti geessuuf akka tahe'' nutti himtee jirti.
Obbo Gadaa Godaanaan namootni kaampiiwwan jiran keessaa jijjiirama qilleensaafi haala jireenyaatti baruu dadhabuun hanga yoonaa yoo xiqqate namootni afur akka lubbuun darban nutti himan.
''Mmarii abbootii gadaa waliin taasifameen uummanni Gujii sabaaf sab-lammii kam wajjin iyyuu nagaadhaan waliin jiraachuu akka barbaaduu fi waraana dabalatee waldhabdee gosa kamiiyyuu akka dhaabbatuuf akkaataa sirna gadaatiin abbaan gadaa araara buusee jira.
Akka mootummaattis marii hawaasa waliin gooneen buqqaatonni akka iddoosaaniitti deebi'anii nagaan jiraatan walii galleerra.'' jedhan.
Image copyright Heldana Tekeste
Goodayyaa suuraa Heldaanaa fi hiriyoonnishee uffata walitti qaban buqqaatota bira geessu
Marii Abootii Gadaa, jaarsolii biyyaa, qeerroo fi hawaasa Oromoo Gujii mara waliin taasifneen wal waraanuun hafee buqqaatonni bakkasaaniitti akka deebi'an walii gallus buqqaatonni saba Geedewoo murtee kanatti amanuurra ammas hookkara kaasuu waan filataniif bakka irraa buqqa'anittis deebi'uuf fedhii hin qaban.
''Hanga ammaatti naannoo irraa buqqa'an naannoo Gadabiitti Ummanni lameenuu hiriira ba'uun nageenya booressaa jiru'' kan jedhan Obbo Gadaa Godaanaa ''gandoota qabnu keessatti ammas hawaasa mariisisuun ummanni buqqa'e akka iddoosaatti deebi'u ni hojjenna , garuu sodaan gama naannoo kibbaatiin jiru furamuu qaba, isaan ammallee mariif eyyamamoo ta'aa hin jiran.
Fedhiin tokkummaarratti qaban gadi aanaa ta'ee nutti mul'ata. kanatu qormaata nutti ta'a.'' jedhan.
Sababa jeequmsaatiin daandiin gara Moyaalee geessu cufamee jiraachuu kan dubbatan Obbo Gadaa Godaanaan ammas taanaan nageenya buusuufis ta'e buqqaatotaaf tajaajila barbaachisu kennuuf hojiiwwan xiyyeeffannaa barbaadu akka jiran dubbataniiru.
'Liyyuu poolisii'n eenyu, akkamiin hundaa'e?
Looltoonni Itoophiyaa daangaa Itiyoo-Eertiraa irraa socha'an